सलमानसँग काम गर्दै्छिन् जेनिशा ? | Jukson
नेपाली फिल्मबाट खासै ठूलो सफलताको पोको हात पार्न नसकेकी नायिका जेनिशा केसी अहिले बलिउडमा जम्ने तयारी गरिरहेकी छिन् । चाँडै उनी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा निर्मित भोजपुरी फिल्म ‘काशी अमरनाथ’मा देखिँदैछिन् ।
बलिउड कलाकारसँग हिमचिम बढाउँदै गएकी जेनिशाको मंगलवार साँझ बलिउड सुपरस्टार सलमान खानसँग भेट भएको छ । सलमानसँग भेट गरेका केही तश्वीरहरु जेनिशाले फेसबुकमा अपलोड गरेकी छिन् ।
तश्वीरसँगै उनले क्याप्सनमा सलमानसँग भेट गर्नुको खास कारण चाँडै जानकारी दिने बताएकी छिन् । जेनिशा र सलमानको भेट मुम्बईको एक स्टूडियोमा भएको हो । के जेनिशा सलमानसँग कुनै प्रोजेक्टमा सँगै काम गर्दै्छिन् ? यो भने भोलीका दिनमा थाहा हुनेछ ।
उनी झन्डै २ वर्षदेखि भारतमा बसेर बलिउडमा इन्ट्री मार्ने तयारी गरिरहेकी छिन् । नायक विराज भट्टको जोडी बनेर आउँदा एक समय नेपाली फिल्ममा जेनिशालाई सफल नायिका रुपमा हेरिन्थ्यो ।
सामाजिक कार्यमा सक्रिय बन्दै एम.आर.आर
विश्वको सबैभन्दा महंगो विमान चढ्छन् साउदीका राजकुमार (फोटो फिचर)
एनिभर्सरीको अवसरमा धुर्मुस सुन्तलीले ल्याए रोमान्टिक प्रेमगीत